आईफोनमा लुकेका नम्बरका साथ कसरी कल गर्ने आईफोन समाचार
आईफोनमा लुकेका नम्बरका साथ कसरी कल गर्ने
NSA घोटाले पछि, प्रयोगकर्ताहरु हाम्रो गोपनीयता को लागी अधिक खोजेको छ। धेरै नै कम्तिमा पनि हामी हाम्रो निजी डेटा निजी राख्ने बारेमा बढी ध्यान दिन्छौं। कहिलेकाँही हामी उपायहरू लिन्छौं, जस्तै ईमेल वा इन्टरनेट खोजी ईन्जिन परिवर्तन गर्ने। हामीले लिन सक्ने अर्को उपाय हो हाम्रो फोन नम्बर लुकाउनुहोस् केवल हामीले चाहेको सम्पर्कहरूले मात्र यसलाई देख्न सक्दछन् (वा अनौंठो हाँसोको लागि, जुन मलाई थाहा छ कसैले यसका बारे सोच्दै छ)।
यदि, जे पनि कारणको लागि, तपाईं सोचिरहनुभएको छ कसरी कल गर्नुहोस् हाम्रो फोन नम्बर लुकाउन जब तपाईं कल गर्नुहोस् तपाईको आईफोनबाट तपाईले यो जान्नुपर्दछ कि कुनै पनि अन्य उपकरणमा कल गर्नका लागि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि, तपाइँको अपरेटरमा निर्भर गर्दै यो एक वा अर्को तरीकाले गरिन्छ, जबकि त्यहाँ एक सामान्य एक हो जुन सबैका लागि मान्य छ।
तर एउटा कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्दछ: जब हामी कल लुकाउँछौं, हामी वास्तवमै यसलाई लुकाउँदैनौं, मँ बताउँछु: यदि हामीले हाम्रो भान्जा भाई पेपे वा कुनामा पट्टी बोलायौं भने, तिनीहरू सक्षम हुँदैनन्। हेर्नुहोस् कसले बोलाइरहेको छ। तर यदि हामी कल गरेमा, उदाहरण को लागी, पुलिस, तिनीहरूले देख्न को लागी कुन नम्बर कल गरीरहेको छ। साथै, कुनै पनि स्वाभिमानी ह्याकरले हाम्रो नम्बर देख्न सक्दछ, तर यो पहिले नै अत्यन्त चरम मामला हुनेछ। तपाईंसँग तल छ लुकेका नम्बरहरूका बारे तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ।
1 कसरी आईफोनमा नम्बर लुकाउने
2 के लुकेको नम्बर रोक्न सकिन्छ?
कसरी आईफोनमा नम्बर लुकाउने
त्यहाँ छन् अपरेटरहरू जुन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँदछ अरू भन्दा बढी। यी अपरेटरहरूसँग, हाम्रो संख्या लुकाउनु बढी सहज हुन्छ, किनकि यो सेटि theहरूमार्फत हिंड्नुका साथै विकल्प खोज्नको लागि मात्र आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं यी कुनै पनि कम्पनीसँग हुनुहुन्छ र तपाईं आफैं विकल्प खोज्न चाहनुहुन्न भने तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ।
हामी आईफोन सेटिंग्स खोल्छौं।
हामी टेलिफोन प्रविष्ट गर्दछौं।
अर्को, हामी छुन्छौं कलर आईडी देखाउनुहोस्.
हामी केवल एक स्विच, लिभर वा टगल। हामी यसलाई निस्क्रिय पार्छौं ताकि जब हामी कल गर्दछौं हामी "लुकेको नम्बर" वा "बाह्य कल" देख्छौं। अवश्य पनि, यो दिमागमा लिनुपर्दछ कि केही सेवाहरू यसलाई हेर्न सक्षम हुनेछन्।
तर यो सँधै सजिलो हुँदैन। वा हो, तर तपाइँले थाहा पाउनुपर्दछ कसरी हाम्रो नम्बर लुकाउने यदि हाम्रो उपकरणले हामीलाई सेटिंग्सबाट त्यो विकल्प प्रस्ताव गर्दैन। हाम्रो नम्बर लुकाउनको लागि, यसलाई उपकरणबाट गरिदिनुहोस् जुन हामी गर्छौं, हामीले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
हामी फोन अनुप्रयोग खोल्छौं।
हामी किबोर्ड पहुँच गर्दछौं।
हामी "# #१ #" "कल गर्न को लागी नम्बर को अगाडि हामी कल गर्न चाहान्छौं। उदाहरण को लागी, यदि हामी कल गर्न चाहान्छौं नम्बर 31 666777999 is हो, हामीले # #१ # 31 666777999 dial डायल गर्नुपर्नेछ र कल आइकन छुनु पर्छ।
को बारे मा नराम्रो कुरा यसलाई मैन्युअल्ली प्रविष्ट गर्नुहोस् त्यो हो, जबसम्म हामी यसलाई हृदयले थाहा हुँदैनौं, हामीले यसलाई कतै लेख्नुपर्नेछ। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा भनेको एजेन्डा खोल्नु हो, हामीले कल गर्न चाहेको सम्पर्कको फाईल प्रविष्ट गर्नुहोस् (यदि हामीसँग यो बचत भएको छ भने) प्रेस गरेर त्यसको नम्बर होल्ड गरेर प्रतिलिपि गर्न, नोट खोल्न, कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् "# #१ # ", पछाडि नम्बर टाँस्नुहोस्, सबै प्रतिलिपि गर्नुहोस् र त्यसलाई प्वालमा टाँस्नुहोस् जहाँ नम्बरहरू देखा पर्छ जब हामी मार्क गर्दछौं।
के लुकेको नम्बर रोक्न सकिन्छ?
हो, तर बारीक हुन्छ। आईओएस आईओएस7बाट सम्भावना को सामिल छ ब्लक कलहरू। यो धेरै अवस्थाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ, जस्तै कसैलाई रोक्नु जससँग हामीसँग अब कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क राख्न वा अनावश्यक विज्ञापन कल ब्लक गर्न, जुन प्रायः केसहरूमा केवल रिस उठाउने कल गर्दछ। आईओएस कल ब्लकरको समस्या यो हो कि यो पूर्ण छैन, किनकि यसले हामीलाई लुकेको नम्बरको साथ कलहरू ब्लक गर्न अनुमति दिदैन। यदि हामी यस प्रकारको कल ब्लक गर्न चाहान्छौं भने हामीले तेर्सो-पार्टी अनुप्रयोगहरूको साथ गर्नुपर्नेछ।
लुकेका नम्बरहरू रोक्नको लागि सब भन्दा प्रख्यात आईओएस अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो ब्लिस ब्लिस। हामी त्यो भन्न सक्छौं खुशी पार्नुहोस् ब्ल्याकलिस्टमा नम्बरहरू राख्नको लागि अनुप्रयोग हो जुन उनीहरूले हामीलाई कल गर्न वा सन्देशहरू पठाउन सक्दैनन्। समस्या यो हो कि यो एक धेरै सस्तो अनुप्रयोग होईन तर जीवनको हरेक चीज जस्तै यो काम लाग्नेछ यदि हामीले खोजेको कुरा पूरा गर्यो भने।
कल ब्लिस - मौन अनावश्यक कल र पाठहरु११.०9,99 €
तर कुनै पनि अनुप्रयोग किन्नु अघि, हामीले गर्न सक्ने उत्तम कुरा हाम्रो अपरेटरले यी प्रकारका कलहरू ब्लक गर्नका लागि सेवा प्रदान गर्दछ कि हुँदैन भनेर पत्ता लगाउँदछ। यो गर्नका लागि, हामीले केवल उनीहरूको समर्थन वेब पृष्ठको भ्रमण गर्नुपर्नेछ र कलहरू रोक्नको लागि सेवा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि हामी यसलाई वेबमा फेला पार्न सकेनौं भने हामी तिनीहरूलाई कल गर्न सक्दछौं र उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि यदि तिनीहरू सेवा प्रस्ताव गर्छन्। अवश्य पनि, सबैभन्दा सामान्य कुरा यो हो कि यो सेवा नि: शुल्क छैन, तर यसको मासिक लागत छ। अपरेटरहरू सामान्य रूपमा चलानीमा अतिरिक्त लागत लिन्छन् जुन अपरेटरको आधारमा फरक हुन्छ, तर यसको लागत € १ हुन्छ।
तार्किक रूपमा, यदि हामी अपरेटरलाई कल गर्छौं र तिनीहरूले हामीलाई बताउँछन् कि उनीहरूले नि: शुल्क सेवा प्रस्ताव गर्दछन्, यो पहिलो विकल्प हुनुपर्दछ। यदि हामी कल गर्दछौं र तपाईं हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईंको लागत प्रति महिना € १ होहामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि एक बर्षमा हामीले € १२ तिर्नेछौं, जब अघिल्लो अनुप्रयोग एक पटक भुक्तान गरिनेछ र, जबसम्म यो एप स्टोरबाट हटाईएको छैन र पुनःस्थापना गरिन्छ, हामी यसलाई सँधै प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं।
तपाईको आईफोनमा कुन विधिलाई तपाईले अधिक प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईफोनमा लुकेका नम्बरका साथ कसरी कल गर्ने
साँचो कलर स्वतन्त्र छ
आईओएस forever सदाका लागि भन्यो
जानकारी को लागी धन्यवाद, धेरै राम्रो लेख।
आईओएस forever लाई सधैँ जवाफ दिनुहोस्
जो cydia प्रयोग गर्न सक्दछन् म कल बृद्धिकर्ता, धेरै छिटो र अधिक आरामदायक सिफारिस गर्दछु।
Sksj लाई जवाफ दिनुहोस्
एडोल्फ आवाज भन्यो
यसले काम गर्दैन; मैले यो मेरो प्रेमिकालाई कल गरेर प्रयास गरें र म call कलमा त्रुटि get
एडोल्फ शोरलाई जवाफ दिनुहोस्
शाओमीले एम आई २ एस शुरू गर्न सक्दछ नयाँ आईफोन एसईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न
केही प्रयोगकर्ताहरूले आईओएस .9.3 ..XNUMX मा सफारीको समस्याहरूको बारेमा गुनासो गर्छन् [UPDATED]